January 19, 2021 - समृद्ध नेपाल
एउटै घरका ३ बहिनीको पुनर्जन्म पहिलो जुनीका बुवा-आमालाई पनि चिन्छ्न !
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ पुरा हेर्नुहोला आफ्नो श्रीमानलाइ तनाव नदिनु नेपाली श्रीमान साच्चिकै देवदुत सावित हुनेछ्नमेरो भनाइमा सहमत हुनेले सेयर गर्नुस। म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलानै हुन्। हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई भ्रष्टाचारी जड्याहा। पर स्त्री गमन ‘बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य
विश्व रहेका सबै जीवहरु बारे हामिलाई थाहा नहुन सक्छ । वैज्ञानिकले खोज गर्ने क्रममा धेरै अनौठा जीवहरु फेला पारिराखेका छन् । यसैक्रममा वैज्ञानिकले एक अनौठो जीव फेला पारेको बताइएको छ । त्यो अनौठो जीव पानीभित्र पाइने बताइएको छ उक्त जीव दक्षिण पूर्व युरोपको देश बोस्निाया र हर्जेगोविनामा भेटिएको हो । उक्त क्षेत्रमा पानीभित्र भएका५ गुफामध्ये
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओमा पर्‍यो अहिलेसम्मकै धेरै आवेदन, कति पर्ला तपाईंलाई ?
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको प्राथमिक सेयर आइपिओमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको छ। बैंकको आइपिओमा १५लाख २९ हजार ४६० जनाले आवेदन दिएका छन्। ‘यो अहिलेसम्म हामीले संकलन गरेको आवेदन हो बैंकबाट आवेदन दिएकाहरूको थपिन बाँकी नै छ सिडिएस एण्ड क्लियरिङका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले सेतोपाटीलाई भने। बैंकमार्फत आवेदन दिनेहरु जोड्दा यो संख्या अझ बढ्नेछ। हालसम्म आइपिओ खुलेको कम्पनीमध्ये
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निष्पक्ष भयरहित विश्वसनीय रूपमा निर्वाचनका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन्।आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आयोग पदाधिकारीसँग शान्ति स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य भएकाले तोकिएको समयमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न जरुरी भएको बताइन्। शान्ति स्थिरता र विकासका लागि ताजा जनादेश अनिवार्य छ उनले
मानिसको जीवनमा यो शब्द बुझेमात्रै पनि जीवन सुखी हुन्छ !
मानिस एउटा चाह राख्छ त्यो पूरा गर्न हरसम्भव कोशिस गर्छ । भगवानसँग प्रार्थना गर्छ । उसको माग सुनुवाइ हुन्छ । धन्यवाद । मलाई पुग्यो भन्दैन।फेरि अर्को कल्पनामा रमाउँछ । त्यो चाहियो भन्छ । जोडबलले प्राप्त गर्छ अनि फेरि असन्तुष्ट मानिस स्वभावैले असन्तुष्ट प्राणी हो । उ विनाअवरोध आफूले चाहेको कुरा होओस् भन्ने सोच्छ । परिणाम
समाज सेवी इशा गुरुङलाइ कोरोना निको हुदै !
समाजसेवी इशा गुरुङलाइ कोरोना निको हुदै गए पछि उस्ले लेखे आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस उस्ले भनेको छ मलाई कोरोना निको हुदै गएको महसुस गरेको छु ! यो पनि ‘बा-आमा मरेपछि परिवारमा चिन्ता हुन्छ त्यसबेला हामी हाँस्न सक्दैनौं उनले भने तपाईं त्यस्तो मानिस हुनु हुँदो रहेछ। हिजो गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा जनता उत्सव मनाउँदै थिएँ त्यसबेला बयलगाडाको कथा
ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोलाॐ लेखि सेयर गरौं
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना सानासाना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह प्रतीक हुन्छ शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ
पूर्व डीआईजी समेत रहेका अभियान्ता तथा भ्रष्टाचार विरोधी छविका रमेश खरेलले चुनाब लड्ने घोषणा गरेका छन् । एपीवान टेलिभिजनमा पत्रकार समा थापासँगको कुराकानीमा खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेर वैशाखमा तोकेको निर्वाचनमा आफू देशका उच्च ५भ्रष्ट नेताहरुमध्ये जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि आफू चुनाव लड्न तयार रहेको बताएका हुन् । उनले वैशाखमा हुने चुनावमा आफूले
सीके राउत ३ महिनामा होस् कि ६ महिनामा, निर्वाचन त हुन्छ नै !
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा सीके राउतले अब हुने निर्वाचनको तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् मधेश आन्दोलनका प्रथम शहीद रमेश महतोको स्मृतिमा सोमबार सिरहाको लहानमा आयोजित सभामा उनले भने आगामी तीन महिनामा होस् वा छ महिनामा निर्वाचन त हुन्छ नै त्यसैले निर्वाचनमा जुट्नुस् ।निर्वाचनबाट शक्ति आर्जन गरेर मधेशी जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्ने भएकाले निर्वाचन
कोमललाई विवाह गर्ने चाहना हरायो आखिर किन ? पुरा जान्नुहोस !
गायिका तथा राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले प्रायः सधैं एउटै प्रश्न झैल्दै आउनुपरेको छ तपाईंले अहिलेसम्म किन विवाह नगर्नुभएको हो र अब कहिले विवाह हुन्छ? यस प्रश्नले दिक्क भएकी गायिकाले अब भने विवाह नगर्ने सोच बनाएकी छन् । उनले भनिन् खै अब त के विवाह गरिएला र मैले धेरै विवाहितहरूको अवस्था हेरेर पनि विवाह गर्ने